कास्कीका ९ सिट मध्ये ८ सिटमा बाम गठबन्धन बिजयी, १ सिटमा कांग्रेस ! – ebaglung.com
कास्कीका ९ सिट मध्ये ८ सिटमा बाम गठबन्धन बिजयी, १ सिटमा कांग्रेस !
२०७४ मंसिर २४, आईतवार १३:२६	Top News, अन्य समाचार, थप समाचार
कविता घर्ती मगर, कास्की २०७४ मंसिर २४ । कास्कीमा ९ सिट मध्ये ८ सिटमा बाम गठबन्धनले बिजय हासिल गरेको छ भने १ सिटमा लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट कांग्रेसले हात परेको छ ।
कास्कीवाट प्रतिनिधिसभाका तिनै सिट बाम गठबन्धनले आफ्नो पोल्टामा पारेको छ । प्रदेशसभाका ६ सिटमा वाम गठवन्दनले ५ सिटमा जित हात पार्यो भने भने १ सिट कांग्रेसले जितेको छ ।
प्रदेशसभा क्षेत्र नम्बर २ ख का उम्मेदवार बिन्दु कुमार थापाले कांग्रेसको साख जोगाउदै कास्कीलाई लाल किल्ला हुनबाट रोकेका हुन् । कास्कीमा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत क्षेत्र नम्बर १ बाट वाम गठवन्दन अन्तर्गतका नेकपा एमालेका उम्मेदवार खगराज अधिकारी , क्षेत्र नम्मर २ बाट वाम गठवन्दन अन्तर्गतका नेकपा एमालेका उम्मेदवार रबिन्द्र अधिकारी , क्षेत्र नम्बर ३ मा नेकपा एमालेका जगत विश्वकर्मा बिजयी भएका छन् ।
प्रदेश सभा तर्फ कास्की क्षेत्र नम्बर १ क मा वाम गठवन्दन अन्तर्गतका नेकपा माओबादी केन्द्रका दिपक कोइराला ,क्षेत्र नम्बर १ ख मा नेकपा एमालेका मन बहादुर गुरुङ , क्षेत्र नम्मर २ क बाट वाम गठवन्दन अन्तर्गतका नेकपा एमालेका उमेदवार कृष्ण थापा , क्षेत्र नम्मर २ ख बाट नेपाली कांग्रेसका उमेदवार विन्दु थापा बिजयी भएका छन् ।
प्रदेश सभा तर्फ कास्की क्षेत्र नम्बर ३ क बाट नेकपा माओवादी केन्द्रका रामजी बराल बिजयी भए । त्यसैगरी कास्की प्रदेशसभा क्षेत्र नम्बर ३ ख मा वाम गठवन्दन अन्तर्गतका नेकपा एमालेका उम्मेदवार नेकपा एमालेका राजिब पहारी बिजयी भए । उक्त विजयी उमेरद्धारहरु विजयजुलुस गर्न लागेका छन। सर्बदलिय बैठक बसेपछि समानुपातिक तर्फको मत गणना गर्ने क्षेत्रिय निर्बाचन कार्यलय कास्कीले जनाएको छ ।
गुल्मीको समानुपातिक मत कांग्रेस एमाले हाराहरीमा